Askari katirsan ciidamada Xukuumadda Kaabul Oo dilay Askari Ameerikaan ah.
Wararka ka imaanaya dalka Afqaanistaan ayaa xaqiijinaya in mid kamid ah ciidamada xukuumadda Kaabul uu weerar ku qaaday askar katirsan ciidamada Shisheeyaha ee duulaanka ku jooga wadanka Afqaanistaan. Askarigan Afqaaniga ah ayaa weeraray ciidamo Maraykan ah oo ay isku goob joogeen, waxaana uu goobta ka geystay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay ciidamada Maraykanka. Ugu yaraan hal Askari oo Ameerikaan ah ...	Read More »
Dhageyso:barnaamijka dhuuxa wareysiyada.
Barnaamijka xiisaha leh ee dhuuxa wareysiyada waxaa caawa lagu soo qaatay qodobo ay kamid ah yihiin khasaaraha ka dhashay weerarkii wasaaradaha Amniga iyo gudaha iyo Abuu Muscab oo ka hadlay weerarkaasi. Falanqeyn weerarka ku saabsan iyo qodobo kale. Halkan ka dhageyso barnaamijka dhuuxa 07 07 2018.	Read More »
Abuu Muscab: Inkabadan 20 ayaan ku dilany Weerarkii Wasaaradaha Amniga iyo Gudaha.(Dhagayso)
Sheekh Cabdul Caziiz Abuu Muscab, Afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shir jaraa’id oo uu u qabtay Warbaahinta wuxuu kaga hadlay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Mujaahidiinta oo uu ku jiro weerarkii Nafhurnimada iyo Inqimaasiga ahaa ee maanta lagu qaaday xarunta Wasaaradaha Amniga iyo Gudaha. Abuu Muscab waxaa uu shaaca ka qaaday in istish-haadi katirsan Mujaahidiinta uu howlgalka ku daah furay ...	Read More »
Ciidamo katirsan Al-Shabaab Oo Gaaf-wareegaya Muqdisho iyo Dagaal culus oo Socda.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan Siinka-dheer iyo Calamada oo kamid ah deegaannada dhaca duleedka magaalada Muqdisho. Dagaallada oo ah kuwa culus, islamarkaana rasaasta la isku adeegsanayo laga maqlayo deegaanno kabaxsan goobta dagaalka ayaa billowday goordhow. Ciidamada Mujaahidiinta ayaa sida muuqata waxay si wanaagsan usoo ...	Read More »
Saraakiisha amaanka ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday iney soo gebe-gebeeyeen weerarkii dagaalyahanno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen xarunta wasaaradaha Amniga iyo arimaha gudaha ee magaalada Muqdisho. Inkastoo weli wax war ah kasoo bixin Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku aadan faafaahin la xiriirta weerarka, hadana waxay dowladda sheeganeysaa iney soo afmeertay weerarka, balse dadka magaalada Muqdisho waxay sheegayaan ...	Read More »
warka duhurnimo waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg warka duhur 07 07 2018.lite	Read More »
Gudoomiyihii hore ee Qoryoolay Oo Qarax Lagu dilay.
Barqanimadii maanta ayaa qarax xoogan waxa uu ka dhacay degmada Baraawe oo kamid ah gobolka Shabeellaha hoose, halkaas oo ay ku suganyihiin ciidamo katirsan Shisheeyaha. Qaraxa ayaa lala eegtay gudoomiyihii hore ee degmada Qoryoolay ee maamulka Koonfur-galbeed Sheekh Cali Buraale, hadana watay qandaraaska dhisida garoon diyaaradeed oo laga furo magaalada Baraawe. Buraaale ayaa goobta ku geeriyooday, waxaana la dhintay askari ...	Read More »
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen xarunta wasaaradaha Amniga iyo arimaha Gudaha oo ku taalla nawaaxiga xarunta Baarlamaanka ee Isgoyska Sayidka. Weerarka waxaa lagu daah furay qaraxyo waaweyn oo si aad ah looga maqlay degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana markaas kadib gudaha xarunta labada wasaaradood oo ...	Read More »
Dagaal oogaha mujrimka ah ee dhibaatada ka wada wadanka Liibiya ee dhaca qaaradda Africa ayaa ku kacaya tallaabooyin akhlaaq daro ah oo ka fog xeerarka dagaallada. Malleeshiyaadka Xaftar oo go’doon adag kusoo rogay magaalada Darna ee Liibiya ayaa gacanta ku dhigay haween muslimaad ah oo kamid ah dadka magaaladaas, kuwaas oo gacanta lagu dhigay iyagoo doonaya iney ka baxsadaan magaalada ...	Read More »
Sarkaal iyo Ciidamo katirsan maamulka Galmudug Oo lagu dilay Mudug.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal ka sameeyey duleedka deegaanka Caad oo dhawaan marti geliyay dagaal adag oo dhexmaray ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa maamulka Galmudug ee Xaaf uu hogaamiyo. Howlgalkan ay ciidamada Mujaahidiinta ka sameeyeen duleedka deegaanka Caad waxaa lagu dilay ciidamo iyo sarkaal sare oo katirsan maamulka Galmudug, kuwaas oo ay soo hubeysay dowladda Itoobiya, dhawaana weerar kusoo qaaday ...	Read More »